प्रेरक प्रसंग : जहाँबाट डा. योेगी विवेकानन्दको जीवन मोडियो ! — Motivatenews.Com
प्रेरक प्रसंग : जहाँबाट डा. योेगी विवेकानन्दको जीवन मोडियो !
काठमाडौं – एकपटक नरेन्द्र नामका एक बालक वनारसको दुर्गा मन्दिरबाट निस्किरहेका थिए । माता दुर्गाको दर्शनपछि शान्त मनले बाहिर निस्किँदै गरेका ती बालकलाई अचानक बाँदरको समूहले घेर्यो। बालकको हातमा प्रसाद थियो ।
बाँदर उनको हातबाट प्रसाद खोस्न चाहन्थे । बाँदरको समूह आफूतिर आउँदै गरेको देखेपछि बालक निकै डराए । उनी आत्तिएर थरथर काम्न थाले । उनी बाँदरबाट आफूलाई बचाउने उपायबारे सोच्न थाले । तर, कुनै उपाय नदेखेपछि उनी बाँदरलाई छलेर भाग्न थाले । तर, ती बाँदरले उनलाई पछ्याउन छाडेनन् । उनी बाँदरको डरले दायाँबायाँ कतै नहेरी दौडिए ।
यो सबै दृश्य नजिकै रहेका एक वृद्ध सन्न्यासीले देखिरहेका थिए । उनले बालकलाई सम्बोधन गर्दै भने– ए बालक, तिमी बाँदरबाट डराएर कता भाग्दै छौ रु डराउन छाड र निडर भई बाँदरको सामना गर । यसरी डराएर भाग्दैमा समस्याको समाधान निस्किँदैन । समस्याको त सामना गर्नुपर्छ । त्यसैले तिमी पनि समस्यबाट नभाग, फर्किएर सामना गर । वृद्ध सन्न्यासीको आवाज सुनेपछि ज्यान बचाउन भागिरहेका बालक अचानक रोकिएर बाँदरतिर फर्किए अनि बिस्तारै पाइला अघि बढाए ।
बालक रोकिएपछि अचम्मै भयो । एकाएक उनलाई झम्टिँदै पछि लागिरहेका बाँदर पनि रोकिए । एकैछिन बालकलाई हेरेर ती बाँदर आफ्नो बाटो लागे । बाँदर बाटो लागेपछि बालक दंग परे । ती बालक पछि गएर स्वामी विवेकानन्दका रूपमा विख्यात भए । उनलाई समस्यासित जुध्न र समस्याबाट नभाग्न प्रेरित गर्ने सन्न्यासी थिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ।
अरु थुप्रै यस्तै-यस्तै उत्प्रेरणात्मक कथाहरु पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
प्रेरक प्रसंग : आफ्नो कामको लागि आफै तयार हुनुपर्दछ
सफलता पाउने सात शुत्रहरु, जसले तपाइको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ
प्रेरक प्रसंग : हाम्रो सफलताको साथी संघर्ष
प्रेरक प्रसंग : जीवनमा मौका आउँछ, त्यसलाई नगुमाउनुहोस्
बाराक ओबामाका केहि जीवनोपयोगी भनाईहरु
सफलता हासिल गर्नका लागि यस्ता कुराहरु अपनाउनुहोस्, एक दिन अवश्य सफल हुनुहुन्छ